बडुले देखाए कांग्रेसको असली तागत, सभामुख ट्वा !::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
बडुले देखाए कांग्रेसको असली तागत, सभामुख ट्वा !
मिडिया डबली संवाददाता प्रकाशित : आइतवार, माघ २६, २०७६
काठमाडौं, माघ २६- कांग्रेसले लगातार तेस्रो पटक प्रतिनिधीसभाको बैठक अवरुद्ध बनाएको छ। सभामुख अग्नि सापकोटाले सुरुवात मै कांग्रेसले विहिबार देखि गर्दै आएको विरोधको सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका थिए ।
तर, उनको प्रयास सफल हुन सकेन। बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा उपभापति विजयकुमार गच्छदार सहित १७५ जनालाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको विरोधमा संसद बैठक अवरोध गर्दै आएको छ।
राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने र असमान ढंगले मुद्दा दायर गरिएको भन्दै कांग्रेसले सडक र सदन अवरोध गदै आएको छ। कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडुले माइक हातमा लिए।
उनलाई सभामुखले समय भने दिएका थिएनन्। माइक अन नभइकनै बडुले आफ्ना कुरा राख्न खोजे। उनले संविधानको धारा १८ मा समानताको हकको प्रत्याभूती गरिएको तर, अख्तियारले भने सत्तापक्षका नेतालाई जोगाएर विपक्षीहरुलाई मात्रै मुद्दा दायर गरी असमान व्यवहार गरेको बताइरहेका थिए। अख्तियारको कदमलाई विदेपूर्ण भएको उनको भनाइ थियो।
बडु बोलिरहँदा सभामुख सापकोटाले रोके। र सापकोटाले आफ्ना कुरा पुनः दोहोर्याए। संसद बैठक सुचारु गर्न सहयोग गर्न आग्रह गरे।
तर कांग्रेसले उनको आग्रह मानेन। त्यसपछि सापकोटाले प्रतिनिधी सभाको बैठक माघ २८ गते मंगलबार दिनको १ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको घोषणा गरे।